ओलीले भने - 'सरकार ढाल्दिऊँ भन्ने हो भने एक हप्ताभित्र सरकार जान्छ' Canada Nepal
Dec 07 2021 | २०७८, मंसिर २१गते
२०७८, मंसिर २१गते
भारतीय पक्षबाट भइरहेको सीमा अतिक्रमणको विरोध गर्दै जंगे पिल्लरमा एमालेको बैठक
२० मिनेट अगाडी
नेपालमा कोरोनाको ओमिक्रोन भेरियन्ट देखिएका २ जनाको रिपोर्ट नेगेटिभ
३१ मिनेट अगाडी
वकिलहरुलाई ओलीको जवाफ - महाभियोगमा देउवा-प्रचण्ड नै तयार छैनन्
दुबई हिँडेका गोविन्द सुनार १६ दिनदेखि बेपत्ता
कोरोना अपडेट : नेपालमा आज ३ सय १५ जनामा कोरोना संक्रमण
राष्ट्रियसभा निर्वाचन कार्यतालिका : २० पुसमा मनोनयन, ५ दिनपछि अन्तिम नामावली
प्रधानन्यायाधीश जबरालाई महाअभियोग लगाउन ओलीलाई बारको ज्ञापनपत्र
क्यानाडा नेपाल कार्तिक ३ २०७८
कांग्रेस महाविधेशन : फुटको फाइदा देउवालाई, महामन्त्रीमा प्रभावशाली नेताको प्रतिस्पर्धा !
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा जिल्ला र प्रदेश अधिवेशनमा स्पष्ट बहुमतका साथ १४ औं अधिवेशनमार्फत पुनः पार्टी नेतृत्व हाँक्ने तयारीमा रहेका छन्।
प्रदेश २ का ८ सहित ६१ जिल्लामा अधिवेशन हुन बाँकी रहे पनि ६१ जिल्ला र प्रदेश अधिवेशनको परिणाम घोषणा हुँदा देउवा पक्ष पार्टीको आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा बहुमतमा रहन सफल भएको हो ।केन्द्रीय निर्वाचन समितिका एक सदस्यले काँग्रेसको आन्तरिक शक्ति सन्तुलनमा यसपटक देउवा शक्तिशाली भएको बताए । ‘सभापतिजीको पक्षमा बहुमत छ । पार्टीभित्र झण्डै ५५ प्रतिशतभन्दा बढी उहाँको पक्षका महाधिवेशन प्रतिनिधिले जितेका छन्, प्रदेशमा पनि बलियो पकड देखिएको छ,’ ती सदस्यले भने ।
नेपाली कांग्रेस १४ औं महाधिवेशनको संघारमा छ । सरकारको नेतृत्व गरेको दल महाधिवेशनको तयारीमा जुटिरहँदा अन्तर्राष्ट्रिय चासो पनि अवश्य हुन्छ । नेपाली राजनीतिक चतुर खेलाडी हुन् काँग्रेस सभापति देउवा ।
लामो भाषण र बतासे गफभन्दा ‘एक्सन’मा विश्वास गर्ने देउवाले कम्युनिष्ट पार्टीको दुईतिहाइ हुँदा–हुँदै पनि देशको प्रधानमन्त्री हुने अवसर प्राप्त गरे। ‘नेपाली कांग्रेसका लागि विशिष्ट अवसर छ अहिले, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा विश्वास आर्जन गरेका नेता देउवा नै हुन्, त्यसैले उनको विकल्प १४ औं महाधिवेशनमा म चाहिँ कल्पना गर्दिनँ,’ कास्कीका एक पुराना नेता तथा महाधिवेशन प्रतिनिधिले भने। कांग्रेसका प्रभावशाली नेताहरू नै देउवाका पक्षमा उभिएपछि सभापति पदमा उनको जीत थप सहज भएको राजनीतिक विश्लेषक डा. उद्धव प्याकुरेलको धारणा छ ।
संस्थापन इतर पक्षमा भने महाधिवेशन नजिकिँदै गर्दा झन् कलह र विभाजन चर्किएको छ। सभापति तथा अन्य महत्वपूर्ण पदमा साझा उम्मेदवार बन्ने संभावना छैन। वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, महामन्त्री डा शशांक कोइराला, नेताहरू शेखर कोइराला, प्रकाशमान सिंहलगायत सभापतिका आकाँक्षी भए पनि उनीहरुबीच सहमति बन्न सकेको छैन। एकले अर्कोलाई स्वीकार्ने अवस्था छैन । यसले पनि सभापतिमा देउवालाई थप सजिलो भएको छ। महाधिवेशनको मुखमा आइपुग्दा पनि शभापतिका लागि देउवा इतर समूहले साझा उम्मेदवारी घोषण गर्न सकेको छैन।
पहिले नै सभापतिमा उम्मेदवारी घोषण गरेका उपसभापति विमलेन्द्र निधि चुनावी मैदानमा कमजोर देखिएको छ। संस्थापन पक्षले सहयोग गर्ने अवस्था छैन भने संस्थापन इतरसँग सहकार्यको संभावना पनि छैन। उनले आफ्.नो टिम बनाउन सकेका छैनन्। अर्का आकांक्षी कृष्ण प्रसाद सिटौला देउवासँग रणनीतिक सहकार्य गरेर १५ औं महाधिवेशनमा आफ्नो स्पेस सुरक्षित गर्ने दाउमा छन् ।
महामन्त्रीमा को बलियो ?
महामन्त्री पदमा थुप्रै आकांक्षी देखिएका छन् । संस्थापन पक्षबाट ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की,बालकृष्ण खाण, प्रकाशशरण महतलगायतका नेताहरुले उक्त पदमा उम्मेदवारीको तयारी गरेका छन् । कांग्रेसका समकालीन नेताहरूमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रहेका ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की प्रष्ट विचार र समन्वयकारी भूमिकामा सधैँ अग्रस्थानमा रहन्छ । नेपाल विद्यार्थी संघका अध्यक्ष रहेर काम गरेका कार्की काँग्रेस सभापति देउवासँग निकट छन् । उनी संस्थापन पक्षमा रहे पनि गुटबन्दीको घेराभन्दा बाहिर छन् र उनलाई अर्को पक्षले स्वीकार्ने अवस्था छ ।
अन्य राजनीतिक दलहरूसँग संवाद गर्न होस् या पार्टीको आन्तरिक सांगठानिक समस्या हल गर्न होस् नेता कार्कीको समन्वयकारी भूमिका अपरिहार्यजस्तै छ । नेपाली कांग्रेसका एक नेताका अनुसार मन्त्री कार्कीको शालीन छवि र सबैलाई मिलाएर लैजान सक्ने सामथ्र्यले उनलाई भावी नेतृत्वकै रुपमा हेरिएको छ । पार्टीको सांगठानिक संरचनामा कार्कीको बलियो पकडकै कारण उनी १४ औं महाधिवेशनमा कांग्रेस महामन्त्री पदमा विजयी हुने आधार रहेको ती नेताले बताएका छन् ।
‘उर्जा मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, कानून मन्त्रालयदेखि सञ्चार मन्त्रालयसम्मको जिम्मेवारीका रहँदा ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की कहिल्यै विवादमा पर्नुभएन, बरु कांग्रेसको सरकार बनेपछि प्रतिपक्षमा पुगेर रन्थनिएका केपी ओलीसँग संवादको प्रक्रिया उहाँले नै सुरु गर्नुभयो, त्यसैले पनि उहाँ एक महामन्त्री पक्का हो,’ ती नेताले भने ।
नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक एवं गृहमन्त्री बालकृष्ण खाण पार्टीका शक्तिशाली संगठक हुन् । नेपाल विद्यार्थी संघ र नेपाल तरुण दल हाँकेका खाणको कार्यकर्ता पङ्क्तिमा निकै सशक्त प्रभाव छ । गृहमन्त्री खाणले महामन्त्री पदमा उम्मेदवारी दिने तयारी गरिरहँदा कांग्रेस पार्टीका शालीन नेता कार्कीपछि उनी नै रहेको एक काँग्रेस नेताले बताए ।
कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य एवं रक्षामन्त्री मिनेन्द्र रिजाल प्रष्ट वक्ता हुन् । केही महिनाअघि नै कांग्रेस महामन्त्रीमा उम्मेदवारी दिने घोषणा गरेका रिजाल पार्टीभित्र र बाहिर रुचाइएका नेता हुन् ।लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीसहित नेपालको नक्सा सरकारले जारी गरेपछि भारतीय टेलिभिजनमा नेता रिजालले दिएको एक अन्तरवार्ता भाइरल भएको थियो ।
नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री प्रकाशशरण महतले अर्थशास्त्रमा विद्यावाधिरि गरेका छन् । देशको आर्थिक नीतिलाई राम्ररी बुझेका महतले पनि कांग्रेस महामन्त्रीमा उम्मेदवारी दिने मनस्थिति बनाएका छन् ।
नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्मा पछिल्लो समय पार्टीका प्रभावशाली नेताको रुपमा परिचित छन् । कांग्रेस सभापति देउवाले प्रवक्ताको जिम्मेवारी दिएपछि शर्माले पार्टीका हरेक गतिविधि प्रष्टसँग राख्न थाले ।
पछिल्लो समय ‘ऐना’ टेलिभिजन शोका प्रस्तोता रहेका शर्माले कांग्रेसको रुपान्तरण र एजेण्डाको विषयमा ‘छहारी संवाद’मार्फत् बहस चलाइरहेका छन् । नेपाल विद्यार्थी संघका पूर्वअध्यक्ष समेत रहेका शर्माले वीपी जयन्तीका दिन सुन्दरीजलबाट महामन्त्री पदमा उम्मेदवारी दिने घोषणा गरेका छन् ।
कांग्रेसका चर्चित युवा नेता गगन थापा महामन्त्रीका बलियो उम्मेदवार हुन्। कार्यकर्ता पंक्तिमा लोकप्रिय गगन कुन समूहबाट अघि बढ्ने भन्ने बारेमा अझै टुगो लागेको छैन। स्वास्थ्यमन्त्रीको जिम्मेवारीमा रहँदा कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य थापाले गम्भीर प्रकृतिका रोगको उपचार निःशुल्क गर्न व्यवस्था गरे । जसका कारण उनको लोकप्रियता बृद्धि भयो । मिडियाको बलियो साथ र कांग्रेसलाई माया गर्ने व्यवसायिक जगतको सद्भाव प्राप्त गरेका गगनको उम्मेदवारी अरुका लागि पनि चुनौती हो ।
मंसिर २१, २०७८ मंगलवार १३:३७:०३ बजे : प्रकाशित
# कांग्रेस महाविधेशन
सभापतिको साझा उम्मेदवार चयन गर्न पौडेल-कोइराला समूहको बैठक सुरु
काठमाडौं - सभापतिको साझा उम्मेदवार तय गर्न नेपाली कांग्रेसको संस्थापन इतर समूहको बैठक चाक्सीबारीस्थित नेता प्रकाशमान सिंहको निवासमा बसेको छ । केही समयअघि मात्र इतर समूहका केन्द्रीय सदस्यहरूसहितको बैठक सुरु भएको हो ।
बैठकमा नेता रामचन्द्र पौडेल, महामन्त्री डा.शशांक कोइराला, कोषाध्यक्ष सीतादेवी यादव, प्रकाशमान सिंह, डा.शेखर कोइराला, बलबहादुर केसी, महेश आचार्य, दीपक गिरी, हृदयराम थानी, डा.मिनेन्द्र रिजाल, चन्द्र भण्डारी, रामकृष्ण यादवलगायत उपस्थित छन् ।
इतर समूहमा सभापतिका आकांक्षी धेरै छन् । पौडेल, सिंह, डा.शेखर र डा.शशांकले सभापतिको उम्मेदवार आफू भएको भन्दै प्रचार अभियान नै सुरु भएको छ । इतर समूहमा धेरै आकांक्षी हुँदा नेताहरूबीच मत नमिल्दा फेरि पनि सभापतिमा शेरबहादुर देउवा नै दोहोरिने भन्दै इतर समूहका युवा नेताहरूले दुई दिनभित्र सभापतिका साझा उम्मेदवार तय गर्न नेतृत्वलाई अल्टिमेटम दिएको छ ।
सोहीअनुसार मंगलबार दिउँसो इतर पक्षको बैठक प्रकाशमान निवासमा बसेको हो । अहिले सभापतिसहित पदाधिकारीको टिम कसरी बनाएर जाने भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ ।
मंसिर २१, २०७८ मंगलवार १३:५९:२७ बजे : प्रकाशित
'राप्रपामा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहको हस्तक्षेप भयो, भजनमण्डली बनाउन दिन्नँ'
काठमाडौं - राप्रपाका निवर्तमान अध्यक्ष कमल थापाले राप्रपालाई आफूले पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहको भजनमण्डली बनाउन नदिने बताएका छन् । मंगलबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै थापाले पार्टीमा पूर्वराजा शाहको हस्तक्षेप रहेको बताए । उनले विज्ञप्तिमा नेतृत्व चयनमा निर्मल निवास र पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रको हस्तक्षेप रहेको भन्दै भर्त्सना र निन्दा पनि गरेका छन् ।
पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले भजनमण्डली बनाएको राप्रपाका नेतृत्वको चरित्रहत्या गर्ने र भ्रम सृजना गराउने कार्य भएको उनको भनाई छ । राजसंस्थाको मान्यतामा अहिले आफू पनि रहिरहेको बताए ।
उनले लेखेका छन् - 'केन्द्रीय नेतृत्वको निर्वाचनमा निर्मल निवास र पुर्वराजा ज्ञानेन्द्रको नांगो हस्तक्षेपको भने म घोर भत्सर्ना र निन्दा गर्दछु । फेरि यो पहिलो घटना होइन। २०७४ सालमा पार्टी फुटाउन र विगत केही समय यता तथाकथित भजन मण्डली खडा गरेर पार्टी नेतृत्वको चरित्रहत्या गर्ने र राप्रपाकाबारेमा भ्रम सिर्जना गर्ने गराउने कार्य निर्मल निवासबाट बारम्बार हुँदै आएको सर्वविदित छ'
एउटा खेलाडी भएको नाताले हार वा जीतले लागि कुनै अर्थ नलाग्ने भन्दैउनले आफ्नो यो अभिव्यक्तिलाई चुनावमा हार पछिको आक्रोशको रूपमा नबुझि दिन पनि आग्रह गरेका छन् । उनले हारलाई पनि सहर्ष स्विकार गरेर फेरी अर्को प्रतिस्पर्धाको निम्ति तयार रहने संस्कार आफ्नो रगतमा रहेको पनि बताएका छन् ।
यस्तो छ उनले जारी गरेको विज्ञप्ति :
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको एकता महाधिवेशन भव्यताका साथ सम्पन्न भएको छ । महाधिवेशन सफल तुल्याउन सहयोग गर्नुहुने सबैमा हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु । महाधिवेशनबाट निर्वाचित अध्यक्ष राजेन्द्र लिंगदेन लगायत सम्पूर्ण पदाधिकारी र सदस्यहरूलाई हार्दिक बधाई तथा सफल कार्यकालको निम्ति शुभकामना व्यक्त गर्दछु ।
महाधिवेशनले पार्टी एकताको पक्षमा सशक्त मार्गनिर्देशन गरेको छ । विगतमा पटकपटक विभाजनको पिडा भोगेको हुंदा भविष्यमा पार्टी कहिल्यै फुटनु हुंदैन भन्ने महाधिवेशनको स्पष्ट सन्देश र संकल्प रहेको छ । अध्यक्ष पदमा पराजयका वावजुद पार्टी एकताको पक्षमा मेरो निरन्तर सकारात्मक सहयोग रहनेछ ।
केन्द्रीय नेतृत्वको निर्वाचनमा निर्मल निवास र पुर्वराजा ज्ञानेन्द्रको नांगो हस्तक्षेपको भने म घोर भत्सर्ना र निन्दा गर्दछु । फेरि यो पहिलो घटना होइन। २०७४ सालमा पार्टी फुटाउन र विगत केही समय यता तथाकथित भजन मण्डली खडा गरेर पार्टी नेतृत्वको चरित्रहत्या गर्ने र राप्रपाका वारेमा भ्रम सिर्जना गर्ने गराउने कार्य निर्मल निवासबाट बारम्बार हुँदै आएको सर्वविदित छ।
मेरो यो अभिव्यक्तिलाई चुनावमा हार पछिको आक्रोशको रूपमा नबुझि दिन सबैमा विनम्र आग्रह गर्दछु । एउटा खेलाडी भएको नाताले हार वा जीतले मेरो लागि कुनै अर्थ राख्दैन । हारलाई पनि सहर्ष स्विकार गरेर फेरी अर्को प्रतिस्पर्धाको निम्ति तयार रहने संस्कार मेरो रगतमा रहेको छ ।
तर, पार्टी भित्रको आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा निर्मल निवासको अवांछित र अमर्यादित हस्तक्षेपले राजसंस्था सम्बन्धि मेरो र राप्रपाको आधारभूत मान्यता माथी नै गंभीर आघात पुगेको छ ।
नेपालको भूराजनीतिक अवस्था तथा धार्मिक, सामाजिक र सांस्कृतिक परिवेशमा राष्ट्रियता र एकताको प्रतिकको रूपमा राजनीति भन्दा माथी उठेको साझा संस्थाको रूपमा राजसंस्था हुनु उपयुक्त हुन्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो र रहि रहने छ ।
राप्रपाले परिकल्पना गरेको राजसंस्था एउटा आदर्श अभिभावकको रूपमा रहने सम्मानित संस्था हो । चुनावी राजनीति भन्दा माथी उठेको सम्पूर्ण नेपालीहरूको साझा र तटस्थ संस्थाको रूपमा हामीले राजसंस्थाको वकालत गरेका हौं ।
अहिले शतप्रतिशत राजावादीहरू भएको पार्टीमा त राजाको ठाडो र फोहोरी हस्तक्षेप (यस सम्वन्धि यथेष्ट प्रमाण हामीसँग सुरक्षित छ) हुन्छ भने भोली राजसंस्था स्थापित हुंदा अन्य पार्टी र राजनीतिमा राजाको हस्तक्षेप हुंदैन भनेर भन्ने हाम्रो नैतिक धरातल समाप्त भएको छ । विगतमा झैं राजाबाट प्रजातन्त्र र प्रजातान्त्रिक संस्थामा हस्तक्षेप हुंदैन भनेर अब हामीले कुन मुखले भन्ने?
अत्यन्त प्रतिकुल अवस्था पनि राजसंस्थाको एजेण्डा बोकेर हिँडेको म र राप्रपालाई अहिले परेको पिर यहि हो । म नैतिक र धर्मसंकटमा परेको छु । यसैगरी देशमा राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक रूपान्तरण गर्न सक्ने शक्ति वा राजनीतिक दलको रूपमा होईन, राप्रपालाई “भजन मण्डली“ बनाउने गलत नियत राखेर मलाई राजनीतिक रूपमा समाप्त पार्न खोजिएको तथ्य स्पष्ट छ । राप्रपालाई “भजन मण्डली“ बनाउने निर्मल निवासको योजना हामी कहिल्यै सफल हुन दिने छैनौं । राजसंस्थाका वारेमा र पार्टीलाई रिमोट कन्ट्रोलबाट चलाउन चाहने निर्मल निवासको योजनाका वारेमा अब राप्रपा भित्र बहस सुरू हुनेछ ।
मंसिर २१, २०७८ मंगलवार १४:१८:११ बजे : प्रकाशित
काठमाडौं - नेपाल बार एसोसिएसनले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई महाअभियोग लगाएर बर्खास्त गर्न भन्दै नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।
मंगलबार भक्तपुरको बालकोटस्थित ओली निवासमा पुगेका बारका प्रतिनिधिले सो आग्रह गर्दै ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् । उनीहरुले जबरामाथि विभिन्न १७ वटा आरोप लगाउँदै महाअभियोग लगाएर बर्खास्त गर्न माग गरेका छन् ।
ज्ञापनपत्रमा जबरामाथि कार्यपालिकासँग साँठगाँठ गरेर भागबण्डा खोजेको, न्याय प्रदानमा अवरोध सृजना गरेको १७ वटा आरोप लगाइएको छ । बारले यसअघि विभिन्न राजनीतिक दलका प्रतिनिधिलाई सोही ज्ञापनपत्र बुझाइसकेका छन् ।
मंसिर २१, २०७८ मंगलवार १४:४०:५७ बजे : प्रकाशित
काठमाडौं - निर्वाचन आयोगले राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचन प्रयोजनका लागि कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको छ । मंगलबार आयोगले निर्वाचन कार्यतालिका र निर्वाचन कार्यक्रम स्वीकृत गरेको हो । स्वीकृत कार्यतालिका अनुसार निर्वाचनमा भाग लिन चाहने राजनीतिक दलले निर्वाचन प्रयोजनका १-१० पुससम्म दर्ता गर्नुपर्ने छ ।
१७ पुसमा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा मतदाता नामावली प्रकाशन हुनेछ । प्रकाशित नामावलीमा नाम समावेश हुन छुट भएका व्यक्तिले आफ्नो नाम समावेश गर्नको लागि दरखास्त दिने, नाम समावेश भएको व्यक्तिले आफ्नो नाम थर उमेर, पद आदि सच्याउन दरखास्त दिने तथा प्रकाशित नामावलीमा उल्लेख भएका मतदाताको विरोधमा उजुरी दिने कार्यक्रम रहेको छ ।
१८-१९ पुसमा निवेदन तथा उजुरीमाथि छानविन र कारवाही गर्ने तथा अन्तिम मतदाता नामावली प्रकाशन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । २० पुसमा उम्मेदवारको मनोनयनपत्र दर्ता गर्ने र मनोनयनपत्र दर्ता भएको उम्मेदवारको सूची प्रकाशन गर्ने कार्यतालिका रहेको आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले जानकारी दिए ।
२१ पुसमा उम्मेदवारको विरोधमा उजुरी दिने, २२-२३ गते मनोनयनपत्र र उजुरीमाथि जाँचबुझ गरी निर्णय गर्ने तथा उम्मेदवारको नामावली प्रकाशन गर्ने कार्यतालिका रहेको छ । २४ पुसमा उम्मेदवारले नाम फिर्ता लिने समय तोकिएको छ ।
२५ गते उम्मेदवारको अन्तिम नामावली प्रकाशन गर्ने तथा उम्मेदवारलाई निर्वाचन चिन्ह प्रदान गर्ने कार्यतालिका छन् । त्यसपछि तोकिएका मतदान केन्द्रमा १२ माघको बिहान ९ बजेदेखि अपरान्ह ३ बजेसम्म मतदान हुने कार्यक्रम आयोगले तय गरेको छ ।
मंसिर २१, २०७८ मंगलवार १४:५१:५२ बजे : प्रकाशित
# राष्ट्रियसभा निर्वाचन
काठमाडौं - नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा हट्दैमा न्यायलय सच्चिने सम्भावना आफूले नदेखेको बताएका छन् ।
मंगलबार आफ्नै निवासमा नेपाल बार र सर्वोच्च बार एसोसिएसनका पदाधिकारीसहित कानुन व्यवसायीहरुसँगको भेटघाटमा अध्यक्ष ओलीले न्यायाधीश, राजनीतिक दल र कानुन व्यवसायीको आ-आफ्नै स्वार्थ भएकाले न्यायलयलाई तत्काल सच्याएर लाने सम्भावना आफूले नदेखेको बताएका हुन् ।
'न्यायलयलाई तत्काल सच्याएर लाने सम्भावना मैले देखेको छैन । किनभने तपाईं हामी कति तयार छौं भन्ने प्रश्न महत्वपूर्ण हो । राजनीतिक दल पनि सच्चिनुपर्नेछ । न्यायाधीश पनि सच्चिनुपर्ने छ । अधिवक्ताहरु, बार पनि सच्चिनुपर्ने आवश्यक देख्छु,' उनले भने ।
अध्यक्ष ओलीले प्रधानन्यायाधीश जबरालाई हटाएर यो यो फैसला गराउने भनेर न्यायाधीश, एमिकस क्युरी, एकपक्ष वकिल बसेर तय गरिएको भन्दै यसरी न्यायलय नसच्चिने पनि बताए । 'अस्ति न्यायाधीश, एमिकस क्युरी र एकपक्ष वकिल बसेर जे तय गरेको छ, त्यो विरोधाभाष कुरा भयो । त्यसले कसरी सच्चिन्छ ?' उनले प्रश्न गरे ।
उनले न्यायलय सुधारको कुरामा एमाले प्रतिबद्ध रहेको तर सबैले कमजोरीहरु सुधार्दै लानुपर्नेमा जोड दिए । 'यो अभियानलाई पूर्णता दिउ । न्यायलय सुधारका २० प्रतिशत कुरा उठाउनुभयो । १०० प्रतिशत बनाएर आउनुस्,' उनले भने ।
'महाभियोगमा देउवा-प्रचण्ड नै तयार छैनन्'
अध्यक्ष ओलीले प्रधानन्यायाधीशलाई महाभियोग लगाउन सत्ता गठबन्धन नै तयार नभएको पनि स्मरण गराए । गठबन्धनका एक जना नेता (प्रचण्ड)ले प्रधानन्यायाधीशले कुनै लेनदेन नगरेको, कांग्रेसको कोटाबाटै मन्त्री (गजेन्द्र हमाल) भएको स्पष्टीकरण दिएकाले राजीनामा दिनुनपर्ने तर्क गरेको उल्लेख गर्दै ओलीले भने, 'चोलेन्द्रजी राजीनामा दिन्न । संवैधानिक प्रक्रियाअनुसार जसरी आएको हो त्यसरी नै जान्छु भन्नुहुन्छ । शेरबहादुर जी भन्नुहुन्छ, मलाई प्रधानमन्त्री बनाएको छ, कसरी निकालौं ?'
ओलीले सत्ता गठबन्धन नेता नै तयार नभएकाले कसरी महाभियोग अघि बढ्छ भनेर प्रश्नसमेत गरे । 'तपाईहरुको महाभियोग कसरी दर्ता हुन्छ, उहाँहरुले त कांग्रेसकै कोटाबाट मन्त्री बनेको हो, प्रधानन्यायाधीशले किन राजीनामा गर्ने भनिरहनुभएको छ । गठबन्धनका नेता (प्रचण्ड), प्रधानमन्त्री नै भनिरहनुभएको छ,' ओलीले सोधे ।
महाभियोगमा एमाले बाधक बनेको भन्ने पारिएकोमा असन्तुष्टि जनाउँदै ओलीले भने, 'हामी पनि बाधक छौं भन्ने परेको छ । केही साथीहरु डबल गेम खेलिरहेको छ । हामी गम्भीर छौं । भित्रबाट भन्ने हो भने मसँग दुइ तिहाइ छैन । एकतिहाइ मात्रै हो । हामी निर्णायक होइन । कोही पनि एक्लै निर्णायक छैन ।'
ओलीले न्यायाधीशहरुको भूमिका स्वच्छ र निष्पक्ष नरहेको भन्दै न्यायलय सच्याउने कुरामा पूर्ण रुपमा आउन वकिलहरुलाई सुझाव दिए । 'न्यायलय सच्चिन जरुरी छ । न्यायिक भूमिका भइराखेको छैन । श्रीमानहरुको भूमिका जस्तो हुनुपर्ने त्यस्तो भएको छैन,' उनले भने ।
निष्पक्ष र स्वच्छ न्यायलयले मात्रै न्याय दिने भन्दै ओलीले निष्पक्षता कुरा बारले नउठाएको भन्दै गुनासो गरे । न्यायिक क्षेत्र अहिले ध्वस्त भएको भन्दै यस स्थितिबाट न्यायलाई स्वच्छ, निष्पक्ष र स्वतन्त्र बनाउन आफूहरुले चाहेको बताए । 'अहिलेको अवस्था न्यायिक स्वतन्त्रता दुरुपयोग गरेर आयो । सदुपयोग हुनुपर्‍यो । साच्चै स्वतन्त्र हुनुपर्‍यो । न्यायमूर्ति निष्पक्ष र न्यायिक मर्यादाभित्र रहनुपर्‍यो । स्वच्छ र नैतिकता हुनुपर्‍यो,' उनले भने ।
उनले परमादेशको फैसलामा सेटिङ भएको भन्दै असन्तुष्टि पोखे । अमेरिकाबाट न्यायाधीशले संविधानबाट ओलीलाई हटाउन नसक्ने भएकाले आउट अफ ट्रयाकबाट हटाएको इमेल, गठबन्धनका नेताले न्यायाधीशहरुको बचाउ गरेको र मानपदवीबाट विभूषित गरेको घटनाले लेनदेन प्रष्ट भएको उनको दाबी थियो ।
'श्रीमानहरु संविधानबाहिर गएर फैसला गरेको भन्नुहुन्छ यो कुरा कतिको न्यायोचित हुन्छ । म कसै व्यक्तिको स्वार्थका लागि जीवन समर्पण गरेर आएको हैन । लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता हुनुपर्‍यो । न्यायलयले कति ठाउँमा आफ्नो सीमा भत्कायो । बार नाघ्यो ?' उनले प्रश्न गरे ।
'७६ अनुसार प्रधानमन्त्रीलाई बहुमत पुग्छ कि पुग्दैन राष्ट्रपतिले हेर्ने हो । अदालतले परमादेश दिएर संविधान संशोधन गर्ने ? संशोधन गर्न पाइन्छ ? यति गते, बजे गर यस्तो गर भनेर भन्ने हो अदालतले ? विघटन राजनीतिक मुद्दा हो । बहस राजनीतिक भयो । तर फैसला पनि राजनीतिक हिसाबले आयो । राजनीतिक हिसाबले आउनु हुन्थेन । अब सच्याउनु पर्छ । यदि फैसला सहि थियो भने किन लेनदेन गर्नुपर्‍यो । अहिलेको रिफ्लेक्सन सत्ता गठबन्धनले तथाकथित पाएको फैसलाको परिणाम हो । न्यायमूर्तिको ड्राफ्टले नै लेनदेन गरेको खुल्यो,' उनले आक्रोश पोखे ।
ओलीले अधिवक्ताहरुलाई सुझाव पनि दिए, 'तपाईहरुको शैली विद्धानहरुले चलाउने अभियानको खालको हुनुपर्छ । कहिले काहीँ बेग्लै दृश्य देखियो ।'
मंसिर २१, २०७८ मंगलवार १८:०७:२५ बजे : प्रकाशित